Trimble wuxuu geeyaa GeoXH, oo leh mitir mitir waqtiga dhabta ah - Geofumadas
Trimble wuxuu GeoXH billaabay wakhti sax ah oo sax ah
Mee, 2008 cadastre, topografia
Waxa ay u muuqataa oo aan lagu kalsoonaan karo, laakiin waxa aad sheegtay Trimble, 2008 GeoXH bixisaa sax submeter in waqtiga dhabta ah.
Qalabkani uma muuqdo mid xun, kaas oo u oggolaanaya xogta laga helo taleefanka gacantu saldhigyada GNSS. Intaa waxaa sii dheer, waxay isticmaashaa Windows Mobile 6, wireless, Bluetooth iyo pickets kale ... halkan waxaa jira shakiyo badan oo dhankaas ah, maadaama la fahamsan yahay in shebekad la leh WAAS ay ku jiri doonto Mareykanka ama Yurub halkaas oo ay ka jiraan adeegyo aan lacag laga qaadayn ama lacag laga bixin ... sidaa darteed Latin Ameerika micnaheedu maahan badan "waqtiga dhabta ah" qaanso
Xaqiiqdii waxaad si dhaqso leh ugu dhaqaaqi kartaa mashruucyo sax ah taasi oo sax ah. Xaaladda jirta, jahawareer ama miyir-qabad miyi ah waa inaysan lahayn dhibaatooyin inuu sidan u shaqeeyo, maxaa yeelay haddii dariiqa sawir-qaadista loo adeegsaday, oo ay la socoto "1" oo daabacan orthophoto: 10,000 oo keliya dhumucda qalin-jabinta ayaa leh qalad ka weyn mitirrada 5 . Dabcan, kacdoon magaalada ah, halkaas oo derisyadu ay ka dagaallamayaan dhumucda darbiga 15 sintimitir, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo postprocessing.
Ilaa hadda ma aanan arkin xalal badan oo la awoodi karo oo loogu talagalay GPS oo leh astaamaha lagu kalsoonaan karo, marka laga reebo Khariidadda Mobile oo ah Magellan, oo inta badan $ 1,500 u saamaxay oo si sax ah u oggolaanaya sax ahaanta laakiin leh postprocessing isagoo adeegsanaya qalab kale oo la mid ah saldhig ama saldhig kale, laakiin had iyo jeer "dhejin."
Iskeed, Mobile Mapper waxba kama badna biraawsar, kaas oo bilaa biloocinta ah, uu helo saxsanaan laga soo bilaabo 2 illaa mitirrada 3, laakiin iyada oo la sixi karo kala duwanaansho, saxnaanta astaamaha waa la gaari karaa. Way jaban tahay inaad lahaato awoodahan hase yeeshe kama fileysid inay ku helaan waqti sax ah.
Haddii aad i weydiiso, waxay ahayd wax raqiis ah, anigu ma garanayo, waxaan u malaynayaa inuu ahaa xaqiiqada ah in uusan isticmaali screen xiriiri lahaa Windows Mobile, ma wireless oo ah alaabtii, laakiin versions cusub ee Mobile Mapper CX qaar ka mid ah taas, halkii loo isticmaalo waad ka heleysaa wax ka yar $ 2,000.
Inkasta oo ay u muuqato in Zowjada Jooji Mobile Mapper Professional, waayo, haatan kaliya dabble la daalacashada iyo u muuqdaan in ay qorsheyneysa inay line a MM6 yeedhay in haddii ay timaado suuqa noqon doonaa ruxruxo wanaagsan, waxay ku hadlaan in ay leeyihiin Windows Mobile 6 la processing post sax-meter sub ka yar $ 1,200 ... sida aan u sheegay oo saaxiib la ah, waxa uu ka shaqeeya fikradda ah quudinta geodatabase ah ee waqtiga dhabta ah via SSM ... rajeynayaa run (sida Zowjada), oo laga yaabo in ay na siiyaan guddiga for regarles ka qoreen.
Ah, waa la iga weydiiyay qiimaha Trimarka GeeyXH?
Isticmaalidda Froogle, Waxaan helayaa tan:
Lama barbar dhigayo jacaylka hooyada… laakiin midabka huruudda ah ee muuska waa mid qurux badan, hehe. Ilaa iyo inta aan u degi doono Moobilkayga Moobiil, oo aan ilaalin doono daryeelka ay u baahan tahay sababta oo ah waxay ku haysaa fayraska hargabka oo isaguna wuxuu igu kacayaa $ 1,500.
Post Previous«Previous Ku soo dheji Jadwalka Excel si AutoCAD ama Microstation
Post Next Google Earth iyo tiknoolojiyadNext »
23 Jawaab "Trimble wuxuu bilaabay GeoXH, oo leh sax ah sub-mitir waqtiga dhabta ah"
WILLIAM DANTE YUCRA RODAS isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan JECESHAHAY IN IIBKA A GPS submeter am Peruvian Geo XT 2008, xigasho RABTO IYO SIDA waxaan aad ka iibsan kartaa
Anigu waxaan haystaa mid ka mid ah imaatinka qiimaha Colombian 2000000 jhoferji85@yahoo.es
Alberto isagu wuxuu leeyahay:
Soo iibso xayiraadda geoexplorer ee Spain
Alex isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan iibinayaa xh 2005, waxaan joogaa Spain
RICHARD RICARDO HUANACUNI CHOQUECOTA. isagu wuxuu leeyahay:
WAQTIGII WANAAGSAN AYAAN KU SAMEEYSAA 'GEO XH BRAND' TRIMBLE '…… .. WAA KU SAMEEYSAA; FADLAN INTERESTEDED PHOTO WAA KU SAABSAN FACEBOOK-kaaga: SUD RICHARD
KU SAABSAN ………… .. 🙂
Edgar Manuel Llanes Collazos isagu wuxuu leeyahay:
Iibso aad TRIMBLE GPS GEO XH XT AMA LA postprocessing sotfware Bogota, Colombia, ka codsaday macluumaad ka distributors ah.
MUHIIM AH INAAD OGAATO qiimaha $ ee kujira POLOS COLOMBIAN PESOS, AGARDESCO waxay siisaa MACLUUMAAD KU SAMEEYA FARSAMADA MADAXWEYNAHA
walaalayaal waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado qiimaha aaladda dalkeygu uu Venezuela
Marco Marin Challco isagu wuxuu leeyahay:
Dhab ahaantii GEO XOOGAHA GEO XH, waa qalab ku dhex yaal ugu fudud gaadiidka.
Ma nihin qaybiyayaal ama iibiya qalabkan. Waxaad ka heli kartaa xigasho shirkad ka iibisa dalkaaga.
JUAN RAMPAS BAEZ isagu wuxuu leeyahay:
HOLA mashiinada kuwan aad u wanaagsan yihiin, laakiin waxaan la yaabanahay waxa qiimaha GEO GEO XH XT IYO WAXAAN AHAY loo qaato INTERASADO FADLAN ii soo diri oraah mahad WARBIXINTAN
f! isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay inaan iibsado GEOXH, qof miyuu lahaan karaa mid iib ah? Mahadsanid ...
Waa inaad ka hubsataa shirkaddaada Trimble ee Ecuador.
duufaan isagu wuxuu leeyahay:
Saaxiibbada salaan, waxaan rabaa inaan iibsado GPS GEO XH 2008 oo noqon lahaa qiimaha Ecuador
JOHN isagu wuxuu leeyahay:
Hello qof walba !! waxaan u baahan tahay caawimaad la GPS GeoExplorer 2008, kor u macluumaad la v3.0 TerraSync iyo marka waxaan rabay in boostada habka ii sheegayaa in aan laga yaabaa in la saxo boos kasta sababtoo ah nooca receptor aan la aqoon. Iskuday inaad ku rakibtid version cusub isla sidaas oo kale. Agradesco horeyba caawintaada. Mahadsanid!
Waxaad ka iibsan kartaa ServiTeodolitos
Luis Vasquez isagu wuxuu leeyahay:
Hada, sidee tahay, Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado haddii ay jirto meel Venezuela ah oo aan ka iibsan karo.
Lima waxaan kugula talinayaa EPTISA, la hadal Fernando Paredes.
MARCO CARRASCO GIRALDO isagu wuxuu leeyahay:
WAXAAN WAXAAN WAXAAN U BAAHAN TAHAY IN AAD GAADIIN GPS GPS, Waxaan rabaa QUOTATIONS, waxaan ahay TOPOGRAPHER. SIDEE AYAAN KA HELI KARAA
RENAND GARCIA isagu wuxuu leeyahay:
hello asxaabta waxaan rabaa inaan iibsado GPS GEO XH 2008 WAA MAXAY KHARASHKA AGOON EE COPNTAO IMMEDIATELY THANKS
Lambda isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan sameeyaa dhowr mar imtixaan mar walba u dhaxeeya labada kooxood. Iyadoo aan libiqsanayn waxaan joogi doonaa Geo XT ama XH.
Iyada oo moodada Mobile I dhibcood ku qaaday daqiiqad hore iyo ka dib daqiiqado 5 ayaan mar kale soo qaatay: farqiga 4m
Waxaan dooranay iibinta Trimble.
Waa waayo-aragnimo, laakiin waan dhaafi doonaa.
Sida qiimaha waa inay noqotaa agagaarka 4000-4500 €
Saaxiib la yiraahdo Trible geoexplorer "million dollars navigator" maxaa yeelay hal milyan oo pesetas jir ah ayaa hadda ah 6 kun euro.
Waa kooxo aad u fiican oo xirfad leh.
Dabcan waxaad heli kartaa saxsanaan ku saabsan mitirka haddii aad leedahay shabakad of corrections NTRIP kala duwan. Bluubku wuxuu isku xiraa taleefanka iyo kan internetka laga bilaabo meeshii saxitaanka kala-duwanaanta laga soo saaro si ka fiican EGNOS dhaqameed (ama WAAS) kaas oo loo diro raadiyaha (nooca RASANT).
Meelo badan oo ka mid ah bulshooyinka iskiis u madax banaan ee Isbaanishka noocan ah ee shabakadaha "firfircoon" shabakadaha geodetic ayaa la hirgelinayaa waxayna u muuqataa inay siinayaan waxqabad aad u wanaagsan.
Kooxaha mihnadlayaasha xirfadlayaasha ah waxaad isticmaali kartaa farsamo la yiraahdo VRS taas oo si siman u siman RTK dhaqameed laakiin waxaad ku badbaadin kartaa qalabka aasaasiga ah.